Okwu na Nkọwapụta Neuropsychological - Ọzụzụ Cognitive
Ulo olu: ọchịchọ ime ka okwu ọnụ nke onye ọzọ yie ka ọ na-ada ụda olu nke onye na-ekwu okwu (Marini et al., BVL 4-12, 2015: 37).
Ọrịa aphasia na-enweghị atụ: [aphasia] Aphasia nke emeputara na mmeputa na-adighi nma, ahịrịokwu dị mkpirikpi, nkwupụta okwu siri ike, isi na-adịghị mma; enwere ike inwe agrammatism. Ihe ibiere maka iche aaphasia nke na-aga were were n’ọnụ n’amaghị ama: ọnụnọ nke apraxia okwu, ogologo ahịrịokwu, ọnụego okwu, ọnụnọ nke agrammatism ma ọ bụ jargon na proody. Ke ofụri ofụri, ọnụnọ nke apraxia okwu na ogologo nke ahịrịokwu na-tumadi na-atụle: ma ọ bụrụ na e nweghị ahịrịokwu esịnede dịkarịa ala okwu isii (ọ dịkarịa ala otu ahịrịokwu nke iri) ọ bụ n'ozuzu aphasia anaghị asọ (Basso, Imaara ma kuzigharia iheaphasia, 2009: 64).
Aphemia: [aphasia] Okwu mbu nke ihe aga - emecha aphasia, nke Paul Broca duziri iji kọwaa ndị na-enweghị ike ịkọwa onwe ha n ’ọnụ agbanyeghị na ha nwere ezigbo nghọta.
Mgbakwunye: [asụsụ] Usoro sistemụ: iji ụda africa dochie ụda esemokwu. Ihe Nlereanya: "cagia" maka "ulo" (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology)
Nnyocha Variance (ANOVA): [onu ogugu, usoro nyocha] usoro omuma atu nke n’eme ka i tulee otu di iche iche n’otu usoro ihe ojoo nke echiche nzuzu, site na atule ihe di iche n’etiti otu na mgbanwe di iche. Bolzani na Canestrari, Logic nke Statistical Test, 1995).
Anteriorization: [asụsụ] Usoro usoro: iji ụda ihu na-edochi ụda azụ. Ihe Nlereanya: "Tasa" maka "ulo" (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology).
aposiopesis: [linguistics] Nkwụsịtụ nke ahịrịokwu nke anaghị aga n'ihu. Dị ka atụmatụ okwu, ebumnuche ya bụ ịhapụ onye na-agụ ya ma ọ bụ onye na-ege ya ntị ka ọ chee echiche. N'ihe banyere aphasias, Otú ọ dị, ọ na-abụkarị mmetụta na-enweghị isi nke enweghị ike ịga n'ihu n'ihi ihe isi ike n'ịhazi ahịrịokwu ma ọ bụ nsogbu na weghachite okwu.
Ajọ nkuzi: Usoro ncheta [neuropsychology, memory] bidoro maka ndị ọrịa amnesic, na-esonye ma duzie mmụta banyere ihe iji gbochie njehie na ncheta ya n'ogo doro anya. Nkụzi na-ezighi ezi na Mmezi Mmezi: Nyocha Mgbaasị, 2012; Mazzucchi, Neuropsychological Rehabilitation, 2012).
Apraxia: Mgbagha nke mmegharị nke mmegharị ọ mụrụ, ma mmegharị nke iji ihe na mmegharị ahụ ihe atụ. Ọ bụghị n'ihi mgbanwe nke sistemụ moto, mpeche nke ọgụgụ isi, nke nlebara anya ma ọ bụ erughi na ịnabata ihe. (Leekwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Ahịrị nke dị mma: [akwara neurochochology] banyere mmiri ihe (leekwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Apraxia Ideomotor: [akwara neurochochology] gbasara mgbanwe nke mmegharị ahụ pụrụ iche, na-abaghị uru (na-e imomi) yana atụ. Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001)
Apraxia na-arụ ọrụ: neurodị ụdị akwara na-emetụta ịkọwa ọnụ ọgụgụ geometric (lee kwa Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Apraxia na akwa: [akwara neurochochology] banyere ike iyi akwa (lee kwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Apraxia nke anya: Ọrịa akwara na-emetụta mgbanwe nke mmegharị anya (leekwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
March Apraxia: ụdị ọrịa akwara na - eme ka enweghị ike ịme ihe (leekwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Optic ziri ezi: [neuropsychology] mwepụta nke nghazi anya nke gụnyere itinye aka n'akụkụ aka na njehie. Ọ na-abụkarị ụbụrụ na-emebi ụzọ ụzọ ọhụụ. Ọ dabere na enweghị ike ịghọta ihe ahụ iru ma ghọta, n'agbanyeghị na mmekọrịta ya na ya n'ogo moto siri ike (leekwa Ladàvas na Berti, Akwụkwọ ntuziaka nke Neuropsychology, 2014).
ịtụkwasị obi (ma ọ bụ ntụkwasị obi): akụ nke ihe omimi nke ihe eji atụ ihe (nnwale) nke na-egosi ogo nkwụsi ike nke ihe ahụ ma ọ bụrụ na a na-atụgharị ihe ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-agwa anyị otu nnwale siri bụrụ ntụkwasị obi (leekwa ya) Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Họrọ nhọrọ: akụkụ akụrụngwa [neuropsychology, care] nke metụtara ikike ekenye ihe nlebara anya na mkpali dị mkpa, na-ebelata nnyonye anya mkpali ndị dị ugbu a mana adịghị emetụta ọrụ a ga-arụ. Ngalaba nke nlebara anya nhọrọ na-agụnye itinye uche n'ihe, nlebara anya na nlebara anya ọzọ (Vallar et al., Neuropsychological Rehabilitation, 2012).
Asụsụ Abụọla Ntanetị (ma ọ bụ Asụsụ ọtụtụ asụsụ): [asụsụ] mgbe amụụrụ asụsụ abụọ n’otu oge (lee Marini Ọrịa asụsụ, 2014: 68)
B nwere njikọ ejikọtara n'asụsụ abụọ (ma ọ bụ ịmụgharị asụsụ): [asụsụ] mgbe amụtabeghị asụsụ abụọ ma ọ bụ karịa tupu etolite etolite ma ọ bụghị na ezinulo ezinụlọ (dịka Marini Ọrịa asụsụ, 2014: 68)
Nkeji abuo mezuru ya (ma obu agha obodo): [asụsụ] mgbe ejiri otu asụsụ ma ọ bụ karịa na-eji asụsụ mbụ dị ka onye etiti (lee Marini Ọrịa asụsụ, 2014: 68)
Abalị abụọ nke asụsụ bidoro: [asụsụ] mgbe nwata ahụ ekpughewo n'asụsụ nke abụọ mgbe nke mbụ gachara, mana n'ọnọdụ ọ bụla tupu afọ asatọ (lee Marini Ọrịa asụsụ, 2014: 68)
Mbubreyo nke asusu abuo: [asụsụ] mgbe nwata ahụ ekpughewo n'asụsụ nke abụọ mgbe nke mbụ gachara, mana mgbe ọ gbarachara afọ asatọ (lee Marini Ọrịa asụsụ, 2014: 68)
Nke imekota asusu abuo: [asụsụ] mgbe ekpughere nwatakịrị ahụ na asụsụ abụọ site na ụbọchị mbụ nke ndụ (lee Marini Ọrịa asụsụ, 2014: 68)
Ahịrịokwu na-ebu (ma ọ bụ ahịrịokwu nkwado): okwu a na-ejikarị eme ihe iji nwee ike ịkpọpụta mkpụrụokwu akọwapụtara (ịmaatụ: "Biko nye m ...").
circumlocution: [linguistics] M na-eji “ntughari nke nkebiahịrị” iji zoo aka na mkpụrụ okwu na - enweghị ike ịgbake (dịkarịsịrị na aphasia). Omumaatu: “nke igbutu achicha” ikwu “nma”.
Ellingsụpe oke: [ịmụ] ikike ịsọpụrụ iwu na mgbakọ dị ugbu a n'asụsụ anyị ugbu a nke na-edozigharị mgbanwe nke asụsụ gere ntị ma ọ bụ n'echiche n'ime asụsụ nke ejiri graphemes (Tressoldi na Cornoldi, 2000, Batrị maka Nyocha nke Ederede na Mpepe ederede na Schoollọ Akwụkwọ nke Iwu)
Nkwuputa Nkwuputa na Nhọrọ ndi ozo (CAA): nkwukọrịta ọ bụla nke nọchiri ma ọ bụ mee ka okwu ọnụ bawanye; bụ mpaghara nke usoro ọgwụgwọ nke na-achọ ịkwụ ụgwọ maka nkwarụ nwa oge ma ọ bụ nke na-adịgide adịgide nke ndị nwere mkpa nkwukọrịta siri ike (ASHA, 2005, kwuru Constantine, Buildinglọ akwụkwọ na akụkọ ya na CAA, 2011: 54)
Conduites d'approche: [aphasia] gbalịa ịbịakwute okwu ahụ site na mbido ụgha ma ọ bụ paraphosi paraphasias. Ihe atụ: "la pa ... pasca, la pasma, la pastia ..." ịsị "pasta" (lee ịmaatụ Marini, Neurolinguistics ntuziaka, 2018: 143 e Mazzucchi, Ntughari Neuropsychological, 2012)
confabulation: [neuropsychology] na ọnọdụ nke ncheta ncheta bụ akara ngosi "dị mma" nke a na-ahazi dịka mmepụta nke nkwupụta ma ọ bụ omume ndị na-ekwekọghị na isiokwu ahụ ma ọ bụ n'oge gara aga, ọnọdụ ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihuSite na afụ ọnụ, G. (1993b). Kpụrụ nhazi dị iche iche. cortex, 29, 567-581) - ekele Ilaria Zannoni
mmekọrịta: [ọnụ ọgụgụ, usoro nyocha] njikọta n'etiti mgbanwe abụọ dị na nke na na mgbanwe otu na-agbanwe na ibe ya. Ihe ndị ọzọ na-agbanwe ugboro abụọ, ọ ga-eme ka mmekọrịta ahụ sie ike karị. Mmekọ ahụ dịgasị n'etiti akara 1 (dịka otu agbanwe na-abawanye, mmụba na-arị elu mgbe niile) yana -1 (ka otu mgbanwe na-abawanye, a na-enwe mbelata oge niile; na akara 0, enwere ebe a. ngụkọ mmekọrịta dị n'etiti ndị mgbanwe abụọ ahụ.
Ọnụnọ nke njikọ nwere njikọ, ọ bụ ezie na ọ siri ike, anaghị egosi njikọ sitere n'etiti mgbanwe abụọ ahụ (lee kwa Welkowits, Cohen na Ewen, Statistics maka agwa akparamaagwa, 2009).
Uegba mkpu: [aphasia] pere mpe, ekwentị na / ma ọ bụ aro, nke enyere na onye ọrịa enweghị ike iweghachite ebumnuche ahụ n’onweghị (lee, dịka ọmụmaatụ, Conroy et al., Iji nkpuchita nke akpukpo oku site na ikwu ihe ga - emeghachi omume n‘omuta anomia na aphasia, 2012)
deafferentation: [neuroanatomy] mbelata nke ọbịbịa neuronal maka usoro achọrọ. Nke a putara site na nkwonkwo nke neurons nke nebido ihe axon na -aru n’oche ochicho, ma obu site na ntu nke onwe ha (lee kwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Adịghị Ike: [neuropsychology] ụdị adịghị ike nke uche (leekwa ụbụrụ ọgụgụ isi ma ọ bụ nlọghachi azụ nke uche), nke emere ka amamịghe dị ala karịa echiche ọgụgụ isi (IQ n'etiti 70 na 50), ihe isi ike nke mmeghari mmekọrịta na ọdịdị nke adịghị ike n'oge mmepe.
Ọkpụkpụ nke akwara ozi: [akwara akwara] nke na - aga n’ihu n’ihu otu oru ma ọ bụ ọrụ nke neurons nke nwere ike ibute gị (leekwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
muffling: [asụsụ] Usoro usoro: ngbanwe nke ụda olu na onye ntị chiri. Ihe nlere: "panana" maka "banana" (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology)
Ationkpụrụ ndọpụ (pụtara pụtara ndọpụ) ọnụ ọgụgụ [ọnụọgụ] atụmatụ nke mgbanwe nke otu data, enwetara site na okirikiri okpu nke iche. Ọ na - egosi etu data agbasasịrịrị n ’nkezi (ya bụ, etu ha si agbagọ agbagọ site na ya) mana, n’adịghị ka ndịiche, a na-egosipụta paramita na otu ntụle ahụ dịka nkezi (lee kwa. Welkowits, Cohen na Ewen, Statistics maka agwa akparamaagwa, 2009).
dysgraphia: na-amụ ihe ederede na-esiri ike, na-enweghị nke a nwere ike ịdaba na nsogbu nhụjuanya ma ọ bụ mmachi ọgụgụ isi (Ajuriaguerra et al., L'écriture de l'enfant. 1 Celsius. n'ime Di Brina et al., BHK, 2010)
Dyspraxia: Ọrịa nkwonkwo [neuropsychology] na-emetụta nghọta nke akparamagwa agwa, ọkachasị ndị a hụrụ n'oge i observedomi. Ọ dabereghị na ụkọ sistem, ụkọ ọgụgụ isi ma ọ bụ enweghị nlebara anya. Ọ dị iche na nke apraxia n'ihi na okwu dyspraxia na-ezo aka n'ọgba aghara a hụrụ n'oge mmepe (leekwa anya) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Verys dyspraxia: [asụsụ] Nsogbu Central na mmemme na ịghọta mmegharị ụda olu dị mkpa maka imepụta ụda, olu na okwu na maka usoro nhazi ha (Chilosis na Cerri, Verbal dyspraxia, 2009 Vd. nwekwara Sabbadini, Dyspraxia na usoro mmepe: nyocha na ntule aka, 2005)
Nsogbu asụsụ mkpọlite: [asụsụ] adịghị ike asụsụ ọ bụla nke na-eme n'oge mmepe, na-enwekwu nsụchi asụsụ ahụ n'onwe ya, na isiokwu ndị nwere otu ma ọ bụ karịa na usoro ndị a: ịla azụ nke ọgụgụ isi, nsogbu zuru oke nke mmepe, nnukwu nsogbu nke ọrụ nyocha, ụkọ ọdịnala dị mkpa (Gilardone, Casetta, Luciani, Nwatakịrị nwere nsogbu ikwu okwu. Nkwupụta ọgwụgwọ usoro na ọgwụgwọ, Cortina, Turin 2008).
Mmetụta nke ikpere ọbara nke ọbara: [akwara neurochochology] nke otu ụbụrụ na - eduga na nke ọzọ na njikwa ikike ma ọ bụ ọrụ moto; ọ bụ ya mere na ndabere nke usoro mbubata ụbụrụ. Ihe atụ bụ asụsụ, ọ na - enwekarị ikike ịhapụ akụkụ ahụ, na usoro visuo, yana ikike izizi ọhụụ Habib, Hemispheric Dominance, 2009, EMC - Neurology, 9, 1-13)
ecolalia: ikwughachi okwu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu ndị mmadụ na -ege ya ntị, na-enweghị nghọtaghị ha. Ọ na-aputa ihe banyere aru oru n’ime umuaka karichaanu afo ato (Marini et al., BVL 4-12, 2015: 37) na pathologically na ndị okenye, ọmụmaatụ na Parkinson's.
Mmetụta olile anya: [usoro nyocha] mgbanwe nke nsonaazụ nke nyocha n'ihi atụmanya nke nsonaazụ nke onye nyocha ahụ zụlitere ma ọ bụ site na isiokwu nnwale n'onwe ha. Onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ, Robert Rosenthal, kọwara ya nke mbụ maka onye akpọrọ ya n'ọnọdụ ụfọdụ Mmetụta Rosenthal (ma ọ bụ Mmetụta Pygmalion o Amụma nke na-emezu onwe ya). Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa iji tụlee na nyocha ebe mmetụta mmadụ bụ ihe na-ekpebi ma ọ bụ n'ihi nke a ka a na-akpọkarị mmetụta a dị ka ihe dị oke mkpa na ọmụmụ banyere mmetụta nke ọgwụgwọ ndị na-adịghị eji otu njikwa njikwa (ntụgharị na ọgwụgwọ ma ọ bụ ọzọ na nke nnwale ahụ) ma ọ bụ ndị na-anaghị eji otu njikwa.
Mmetụta ọnọdụ: [mmụta] hụ Usoro ihe omuma nke omuma ihe omuma
Mmetụta Pygmalion: vedi Mmetụta anya
Ihe mmetụta: [akparamaagwa, ọgwụ] mmụba nke usoro ọgwụgwọ na-enweghị mmetụta ọ bụla akọwapụtara yana jikọrọ ya na ntụkwasị obi etinyere na ọgwụgwọ ahụ n'onwe ya. Mmetụta a, n'otu aka ahụ kaMmetụta anya, na-abụkarị ihe mgbochi na nyocha banyere mmetụta nke ọgwụgwọ ma jiri ya na-achịkwa ya site na iji otu isiokwu, nke a na-akpọ nke ha njikwa otu, nke a na-enyeghị ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ nke adịgboroja na-eme
Mmetụta ugwo: [mmụta] hụ Usoro ihe omuma nke omumu ihe omuma
Mmetụta Rosenthal: vedi Mmetụta anya
hemianopia: [neuropsychology] ọnwụ nke ọhụụ na ọkara nke mpaghara anya (ma ọ bụ nke otu quadrant n'ihe banyere quadrantanopia) ọnya ọnya ihu anya nke optic chiasm, ọnya optic, radieshon ma ọ bụ cortex anya (leekwa anya) Ladàvas na Berti, Akwụkwọ ntuziaka nke Neuropsychology, 2014)
Spatal eminegligence (lee Na-ehichapụ)
kwuru: [asụsụ] dabere na njirimara e jiri mee ihe, enwere ike ịkọwa ya dị ka "nsị nke ụda n'agbata nkwusi abụọ nwere nghọta (zuru ma ọ bụ ihe efu) na-adịgide ma ọ dịkarịa ala sekọnd abụọ" (acoustic criterion), "homogeneous conceptual block, or a simple or mgbagwoju project nchịkọta asụsụ), “isi okwu na - esote usoro nke usoro nke abụọ ahaziri nke ọma site na echiche ụtọasụsụ”. (Marini et al., BVL 4-12, 2015: 69)
Errordị m njehie: [psychometrics] ịjụ nkwenye efu mgbe ọ bụ eziokwu.
Ihe Nlereanya: onye na-eme nchọpụta na-eche na usoro okwu ọhụụ na-eme ka akụkụ ụda olu dị mma karịa usoro ọgwụgwọ; mgbe emechara nkwupụta ahụ na nyocha nnwale, ọ jụrụ H0 (yabụ na ọgwụgwọ abụọ ahụ hà nhata) ma nabata H1 (ya bụ na ọgwụgwọ ọhụrụ ahụ ka mma) mana n'eziokwu ọgwụgwọ abụọ ahụ na-enye otu nsonaazụ ahụ na esemokwu dị iche iche achọtara usoro njehie ma ọ bụ mmetụta nke ohere (lee kwa Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Errordị II: [psychometrics] na-anabata echiche efu mgbe ọ bụ ụgha.
Ihe Nlereanya: onye na-eme nchọpụta na-eche na usoro okwu ọhụụ na-eme ka akụkụ ụda olu dị mma karịa usoro ọgwụgwọ; mgbe o tinyechara nkwupụta ahụ na nyocha nnwale, ọ na-anabata H0 (yabụ na ọgwụgwọ abụọ ahụ hà nhata) ma jụ H1 (ya bụ na ọgwụgwọ ọhụrụ ahụ ka mma) mana n'ezie ọgwụgwọ abụọ ahụ na-enye nsonaazụ dị iche. Enweghi nsonaazụ na nke a, n'aka nke ọzọ, ga-adabere na njehie usoro, obere mkparịta ụka na-enweghị isi n'ihi ohere, ma ọ bụ n'ihi ike dara ogbenye nke ule ọnụ ọgụgụ (lee kwa Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Arithmetic eziokwu: [mgbakọ na mwepụ] Ha bụ nsonaazụ nke usoro usoro ọmụmụ na-agaghị agbakọ, mana ka enwere ebe nchekwa. Iji maa atụ, tebụl ọtụtụ ihe na nchikota dị mfe. (Poli, Molin, Lucangeli na Cornoldi, Ihe ncheta, 2006: 8)
Ihe nzacha: [aphasia] nkwusi zuru ezu nke etolite site na ụda, fọnịm, nkeji ụda okwu ma ọ bụ mpekere nke okwu. A na-ahụkarị ha na mmalite mmalite. "Ma taa bu ubochi mara nma" (dika ọmụmaatụ Marini, Neurolinguistics ntuziaka, 2018: 143)
phonology: [linguistics] Disdọ aka na ntị nke na-amụ nrughari ụda olu nke ọkà okwu nwere banyere asụsụ ala nna ya, nke ahụ bụ sistemụ na-amalite n'afọ ndị mbụ nke ndụ mmadụ na nke etinyere ndịiche n'etiti ụda na-egosi ọdịiche dị n'iche na ụda nke adịghị iche ha (- Nespor, phonology, 1993: 17)
Agba ahịrịokwu: [asụsụ] hodzọ nke jikọtara agba dị iche na nke ọ bụla nke ahịrịokwu (isiokwu, isiokwu, ngwaa…). Enwere ike iji ya ma ahịrịokwu edere ede na nke eserese eserese (lee, ọmụmaatụ, AA VV, De Filippis protocol therapy protocol, 2006).
Mgbasa ozi: [asụsụ] Usoro sistemụ: iji ihe ntụgharị uche dochie anya ma ọ bụ jupụta ụda. Ihe Nlereanya: "fasso" maka "eziokwu" (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology)
Functors: [linguistics] vd. Okwu mmeghe na imechi
Ọrụ ndị isi: [neuropsychology] usoro amamịghe siri ike maka ime atụmatụ na ịchịkwa afọ ojuju nke akparamagwa, ihe dị mkpa na ọrụ ndị na - abụghị akpaghị aka nke chọrọ nlebara anya dị mkpa (leekwa anya edemede anyị banyere ọrụ ndị isi; Grossi na Trojano, Neuropsychology of the Frontal Lobes, 2013).
Mgbanye: [asụsụ] Usoro usoro: ngbanwe nke mgbochiume na semiconsonant. Ihe Nlereanya: "foia" maka "akwukwo" (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology)
Mmegharị batrị: udi mmeghari aka na-eme site n’elu rue ala iji gosi mkpuru edemede nke okwu ma obu okwu nkebiahịrị (n’ọrụ mmegharị ahụ. Okwu mmalite nke usoro ọgwụgwọ na oge uto, p. 234)
Nnweta ọnya siri ike: [neurology]: "Nnukwu ụbụrụ merụrụ ahụ" (GCA) pụtara mmerụ ụbụrụ, n'ihi trauma cranioencephalic ma ọ bụ ihe ndị ọzọ (ọrịa ụbụrụ, ọbara ọgbụgba, wdg), dị ka iji chọpụta ọnọdụ nke coma (GCS = / < 8 maka ihe karịrị 24 awa), na ihe mmetụta uche, mmetụ ma ọ bụ mmejọ omume, metụtara oke nkwarụ (cf. Nnọkọ nkwenye: Ezigbo Ọgwụ Ndị Ahia na Hospitallọ Ọgwụ Maka Ndị Ọrịa Nwere Nnukwu Ahụhụ).
Otu Njikwa: [usoro nyocha] na nyocha nke ọ na-amụ banyere nsonaazụ mgbanwe nke onwe nọọrọ onwe ya na otu isiokwu, dịka ọmụmaatụ ọgwụgwọ, ihe nlele ahụ na-abụkarị nke abụọ ma ọ dịkarịa ala: otu nnwale, nke na-anata ọgwụgwọ n'okpuru nyocha (agbanwe. nọọrọ onwe ha, yana ndị na-ahụ maka njikwa, nke na-anaghị enweta ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ na-anata usoro ọzọ (yabụ na-esiteghị na mmetụta nke mgbanwe nọọrọ onwe ha). Otu njikwa ahụ bụ nke ejiri ntụle nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ atụnyere na nnwale iji belata mmetụta nke ụfọdụ mgbaka (lee lee) Ercolani, Areni na Mannetti, Nchoputa Na Psychology, 1990).
Nnyocha-moto [neuropsychology, otutu sclerosis] ihe omumu nke a na-ahụ n'otu oge na-arụ ọrụ ụgbọ ala (dịka ọmụmaatụ ịga ije) na ọrụ ọgụgụ isi (dịka ọmụmaatụ iji kwuo okwu niile na-amalite site na leta ụfọdụ); n'ọnọdụ ndị a ọ ga-ekwe omume ịhụ nbelata arụmọrụ moto, cognition ma ọ bụ ha abụọ. A na-amụrụ nnyonye nke ụbụrụ na-emetụta ihe gbasara ọrịa sclerosis dịka ọ na-eme ugboro ugboro ma pụta ìhè karịa na ndị ahụike (lee Ruggieri et al., 2018, Maazị mgbaàmà nke nnyonye anya na nnyonye anya na nnabata ọrịa sclerosis).
Ntinye cross-modal: [neuropsychology] onu nke mejuputara isonyere ihe omuma sitere na uzo nkpuru obi di iche na otu nghota. Kpọmkwem, ọ bụ nghọta nke gụnyere mmekọrịta n'etiti ọnọdụ abụọ ma ọ bụ karịa dị iche iche (https://en.wikipedia.org/wiki/Crossmodal).
Oge ntụkwasị obi: [psychometry] bụ oke nke ụkpụrụ dị n'etiti oke abụọ (nke ala na nke elu) n'ime ya, na-enwekarị ihe puru omume (ọkwa nke obi ike), a na-ahụ oke oke.
Ọmụmaatụ: ọ bụrụ na ị nye WAIS-IV, IQ nke 102 pụta na nkeji 95% kwenyesiri ike n'etiti 97 na 107, nke a pụtara na pacenti iri itoolu na ise “ezi” IQ nke onye enyochaa bụ uru dị n’agbata 95 na 97 (lee kwa Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Ọzọ hypothesis: gosiputara [psychometry] na H1. na ngalaba nyocha ọ bụ echiche nke onye nchọcha wepụtara na nke anyị bu n’obi ịnwale.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye nyocha ahụ kwenyesiri ike na ọgwụgwọ ọzọ na-enye nsonaazụ dịgasị iche site na ọgwụgwọ oge niile, H1 ga-anọchite anya ịdị adị nke ọdịiche a n'etiti ụzọ abụọ dị iche iche.
A kọwakwara ya dị ka nke nkwenye efu bụ ụgha, na-akọwapụta ụkpụrụ maka uru enyere enyere (lee kwa Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Nzuzu hypothesis: [psychometry] gosikwara na H0, n'ọhịa nke nyocha ọ na-ezo aka na nkwupụta a kwenyere na ọ bụ eziokwu na enweghị enweghị ihe akaebe na-emegide nwere ike ịgbagha ya.
Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, a na-ezube iji gosipụta na otu ọgwụgwọ dị irè karịa nke ọzọ, H0 ga-anọchite anya nkwupụta na enweghị ọdịiche dị n'etiti ọgwụgwọ abụọ ahụ.
A kọwapụtara ya dị ka otu nke egosipụtara uru nke parameter n'ime ihe doro anya ma ọ bụ ọdịiche a na-atụ anya ya (nke na-ekwekọkarị na efu) n'etiti parameters nke mmadụ abụọ (lee lee. Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Nkezi Ogologo Nkwupụta (LME): [asụsụ] nke Brown webatara na 1973, echiche pụtara ogologo oge nke ahịrịokwu na-egosi nkezi nke okwu ma ọ bụ morphemes nke onye na-ekwu okwu wepụtara na nlele - nke na - abụkarị - nke ahịrịokwu 100 (lee Sentence). Ọ bụ otu n'ime indices nke amamịghe asụsụ na mmepụta (lee, Brown, Asụsụ mbụ, 1973).
Nkewa Akwụkwọ: [aphasia] Nkwupụta dị ka nke ndị ọrịa agrammatị ji arụ ọrụ, n'agbanyeghị na ha na-enwe ezigbo ikike, na-enwe nsogbu n'ikenye ọrụ isiokwu nke ndị mejupụtara ahịrịokwu ahụ na usoro esemokwu nke ngwaa (lee Boscarato na Modena na Flosi, Charlemagne na Rossetto, Limezigharị onye ahụ aphasia, 2013: 57)
Ọgwụ Melodic Intonation (MIT): [aphasia] na-agbaso ndozi nke aphasia nke na-eji akụkụ egwu nke okwu (abụ olu ụtọ na egwu) site na ịbụ abụ (lee Norton et al., Melodic Intonation Therapy: Nnwekọrịta nghọta gbasara otu esi eme ya yana ihe kpatara eji enyere ya aka, 2009)
Ebe nchekwa ọrụ: Usoro [neuropsychology] nke ga - enyere gị aka ịchekwa ozi nwa oge iji chịkwaa ya ma ọ bụ megharia ya (cf. Baddeley na Hitch, ebe nchekwa Ọrụ, 1974). Leekwa edemede anyị Gịnị bụ ebe nchekwa.
Ebe nchekwa: [neuropsychology] ikike icheta ime ihe mgbe emechara ya (lee ọmụmaatụ, Rouleau et al. Mwepu ncheta ihe di n'ihu na otutu sclerosis: nyocha, 2017). Hụ kwa isiokwu omimi anyị Ebe nchekwa anya na otutu sclerosis
Meta-analysis: ụdị ụdị nke ọnụ ọgụgụ na-enye ohere ichikota nsonaazụ nke ọmụmụ dịgasị iche iche banyere otu isiokwu, na-anwa ibelata nsonaazụ nke isi mmalite nke nsonaazụ nke otu ọmụmụ, na-eme ka usoro ọ bụla pụta (lee lee. Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Metacognition: okwu na-ezo aka banyere mmadụ ịmara ihe ya na, n'otu oge ahụ, usoro na atụmatụ dị iche iche na-ahazi ya (lee kwa Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Ihe omumu ihe omumu: ike ịtụle, nkebi na ikpa oke okwu edepụtara nke edere n’elu ndabere nke ihe eji ekwu okwu ha (Bishop & Snowling, Ọrịa dyslexia na ntụpọ asụsụ ụfọdụ: otu ma ọ bụ iche?, Psychol Bulletin 130 (6), 858-886, 2004)
ịme ngosi uwe (lee Pingkpụzi)
Ọkpụkpụ na usoro izizi: usoro izizi na - agbanwe ihe mgbakwasị ụkwụ (dịka ọmụmaatụ cas + in + a); inflectal morphemes na agbanwe naanị ụdị edemede okwu. Dịka ọmụmaatụ, nwoke ma ọ bụ nwanyị: cas + a (cf. Marini et al., BVL 4-12, 2015: 13)
Na-ehichapụ: [neuropsychology] ọrịa neuropsychological, na - esite na mmerụ ahụ ụbụrụ, nke nwere mmebi na mmata gbasara ọnụnụ. Onye na-egosi ihe mgbaàmà ndị a na-egosi ihe isi ike n'ịchọpụta ebe ihe siiri na nkwonkwo ụbụrụ, ịma ụma banyere ihe mkpali dị n'akụkụ akụkụ nke onwe gị (ọ na-abụkarị nke dị n'ime), ọnọdụ onwe ya ma ọ bụ nke na-apụ apụ (leekwa isiokwu anyị.) Elefu: akụkụ gbara ọchịchịrị nke ụwa)
Nleghara anya gbasara oghere (lee Na-ehichapụ)
Neurons nke enyo: [neuroscience] klas nke akwara ozi nke na-arụ ọrụ ma mgbe mmadụ na-eme ihe na mgbe otu onye ahụ na-ahụ otu ihe omume nke isiokwu ọzọ (https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio)
holophrasis: [linguistics] iji otu mkpụrụ okwu maka nkwupụta ma ọ bụ arịrịọ ga-achọ ahịrịokwu dum. Ọ bụ ụdị nke asụsụ izizi dị nwata. Ex: "cua" maka "Achọrọ m mmiri".
paraphasia: [aphasia] okwu mepụtara n'ụzọ na-ezighi ezi n'ihe gbasara ebumnuche. Paraphasia nwere ike buru olu (dika: "libbio" maka "akwukwo") ma obu ntughari asusu ("akwukwo eji ede ihe" maka "akwukwo"). (lee ihe atụ Marini, Neurolinguistics ntuziaka, 2018: 143)
Mepee okwu klaasị mechiri emechi: [linguistics] okwu ndị mepere emepe (ma ọ bụ ọdịnaya okwu) bụ nouns, iru eru adjective, lexical ngwaa na ngwaa na-agwụ na -mente; emechi klas okwu (ma ọ bụ okwu okwu o functors) aha nnochi anya, ihe ekwesighi iru eru, edemede, njikota aka, ngwa okwu na nke ekwuru. Ọ bụ ezie na okwu ndị dị na ya na-ekwupụta usoro ọmụmụ, ndị ọchị na-ekwupụta mmekọrịta dị n'etiti okwu.
Nnyocha Ihe Nnyocha Ọgwụ: usoro [aphasia] Leonard, Rochon and Laird (2008) nke mejupụtara na-egosi onye ọrịa ihe oyiyi na etiti nke a mpempe akwụkwọ na-arịọ iji weghachite lekwasịrị anya okwu. N’agbanyeghi ihe ịga nke ọma, a na-agwa onye ọrịa ahụ ka ọ weghachite okwu rhymy, fọnịm nke mbụ, okwu ọzọ nke na-amalite n’otu fọnịm na ọnụọgụ ụda olu. (lee Boscarato na Modena na Flosi, Charlemagne na Rossetto, Limezigharị onye ahụ aphasia, 2013: 47)
Plasticity nke neuronal: [neuropsychology] Ikekwe mkpụrụ ndụ akwara nwere ike ịrụ ọrụ ndị ọzọ ma ọ dị mkpa. (Gollin, Ferrari, Peruzzi, Ihe omumu maka uche, 2007: 15).
Ike ule nnwale: [psychometry] pụtara ihe gbasara nke puru ịjụ nkwenye efu, site na nyocha ọnụ ọgụgụ, mgbe nke a bụ ụgha n'ezie.
Ihe Nlereanya: ọ bụrụ na ule e nyere na nha nke enyere nyere nwere ikike mgbakọ na mwepụ nke 80%, nke a pụtara na enwere ohere 80% ịnweta data nke na-eme ka anyị jụ nkwenye efu, ọ bụrụhaala na nke a bụ ụgha n'ezie (lee kwa Weltkovitz, Cohen na Ewen, Statistics for Behavioral Sciences, 2009).
Usoro sistemụ: [asụsụ] Dochie otu ekwentị na nke ọzọ, ebe usoro syllabic adịghị agbanwe agbanwe (lee, dịka ọmụmaatụ, Santoro, Panero na Cianetti, otu obere 1, 2011).
Usoro nhazi: [asụsụ] Ngbanwe usoro syllabic nke okwu a, na mgbanwe na otutu ihe na usoro nke ụdaume na ụdaume nke mejupụtara ya (lee ọmụmaatụ, Santoro, Panero na Cianetti, otu obere 1, 2011)
Amụma nke ji emezu onwe gị: vedi Mmetụta anya
Na-akwalite Mmetụta Nkwupụta Aphasics (PACE) : [aphasia] pragmatị ọgwụgwọ makaaphasia nke onye na-ekwu okwu na-akọwa usoro niile ga - ekwe omume iji kwado ma mee ka nkwupụta okwu nke onye ọrịa ahụ sie ike (lee maka nyocha Trombetti na Flosi, Charlemagne na Rossetto, Limezigharị onye ahụ aphasia, 2013: 105 e Charlemagne, Pragmatic na-eru nso na ọgwụgwọaphasia. Site n'ụdị ihe atụ nye usoro PACE, 2002)
Ikike akara aka: [psychometry] mgbanwe nke Z akara (yana pụtara 0 na ọkọlọtọ ịgbagharia 1) gaa na akara na pụtara 10 na ọkọlọtọ iche 3. E jiri ya tụnyere akara Z ọ bụ ya mere dị iche naanị n'ọdịdị mana akụrụngwa ahụ ka dị otu. Uru ya bụ na ọ na - eme ka ọ bụrụ ihe na - enweghị ike na akara nke nwere uru na - adịghị mma ga - eme, ọbụlagodi na ọ dị ala karịa nkezi. A na-eji ha na ule dị iche iche dịka, dịka ọmụmaatụ, NEPSY-II.
Akara Akara Akara: [psychometry] mgbanwe nke Z akara (na pụtara 0 na ọkọlọtọ ịgbagharia 1) n'ime akara na pụtara 10 na ọkọlọtọ iche 3. Tụnyere a akara Z ọ bụ ya mere dị iche iche naanị n'ọdịdị ma Njirimara bụ otu. Uru ya bụ na ọ na - eme ka ọ bụrụ ihe na - enweghị ike na akara nke nwere uru na - adịghị mma ga - eme, ọbụlagodi na ọ dị ala karịa nkezi. A na-eji ha na ule dị iche iche dịka, dịka ọmụmaatụ, WISC-IV.
Akara Akara: Ejiri akara ule na-eji ọtụtụ ule (dịka ọmụmaatụ na BVN 5-11) na akụ dị ka IQ (leekwa ọgụgụ isi ọgụgụ isi).
T akara (T n'ọtụtụ): [psychometry] mgbanwe nke Z akara (na pụtara 0 na ọkọlọtọ ịgbagharia 1) gaa na akara na pụtara 50 na ọkọlọtọ iche 10. Tụnyere a akara Z ọ bụ ya mere dị iche iche naanị n'ọdịdị mana Njirimara na-abụ otu. Uru ya bụ na ọ na - eme ka ihe omume na - adịghị mma ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị karịa (leekwa.) Ercolani, Areni na Mannetti, Nchoputa Na Psychology, 1990). A na-eji ha na ule dị iche iche dịka, dịka ọmụmaatụ, na Towerlọ elu nke London.
Akara Z (akara eji ama atụ): [ọnụ ọgụgụ, psychometry] akara na-egosi etu uru otu si agabiga na atụghị anya ya, na-atụnyere ya etu ọ dị. Ihe akara a putara ihe 0 na ntughari uche nke 1 nke mere na akara Z nke 0 na-egosi otu uru zuru oke kwekọrọ na atụmanya, akara dị elu karịa 0 na-egosi uru dị elu karịa nkezi na akara dị ala karịa 0 na-egosi uru dị ala karịa nkezi. A na - enweta ya site na mwepu uru dị na uru a hụrụ na ịkewa ihe niile site na ndọpụ iche nke nkezi: (hụrụ uru - etiti) / ndọpụ ọkọlọtọ (lee kwa Welkowits, Cohen na Ewen, Statistics maka agwa akparamaagwa, 2009).
Quadranopsia: (lee hemianopia)
Ọnụọgụ Ọnwụnwa (RCT): A na-akọwa usoro [nyocha] dị ka usoro nyocha nnwale "n'ezie" n'ihi na ọ na-enye ohere ịchịkwa nnwale zuru oke banyere mmasị. Ọ na - enye ndị mmadụ ihe ọmụmụ nyocha ahụ ka ana - ekewasị ya (na - enweghị usoro) na nnwale ma ọ bụ na - achịkwa ya ka onye ọ bụla nwee ike ịme otu ma ọ bụ ọzọ (otu na - enweghị otu) otu ndị ahụ dị iche na ibe ha, nke ga-eme ka enwee obi abụọ na ọ ga-ekwe omume mgbanwe nke mmasị (lee lee) Ercolani, Areni na Mannetti, Nchoputa Na Psychology, 1990).
Otu narị na narị [onuogugu, psychometry] nhazi site na onodu nke ndi mmadu n’ebido na nkesa nke otutu site na 1 rue 99. A na-eji ha n'ọtụtụ ule, dịka ọmụmaatụ na Batrị fortali maka ADHD (lee kwa Ercolani, Areni na Mannetti, Nchoputa Na Psychology, 1990).
Achọpụtara usoro ọgwụgwọ (ROT): [neuropsychology] ọgwụgwọ nke ebumnuche ya bụ iji melite nghazi na oge, ohere yana gbasara onwe ya. Enwere usoro ROT (usoro nzukọ akọwapụtara nke ọma) na ROT na-ezighi ezi, nke ndị ọrụ na-abụghị ọkachamara na-arụ ọrụ ụbọchị niile. (Gollin, Ferrari, Peruzzi, Ihe omumu maka uche, 2007: 13)
Usoro ọgwụgwọ Syntax belatara (REST): [aphasia] Ọgwụgwọ maka ndị ọrịa agrammatic aphasic bụ ndị, kama ilekwasị anya na mmepụta nke ahịrịokwu ziri ezi, na-eme ka ojiji nke usoro dị mfe dị ka ndị ejiri isiokwu dị iche iche na-emekọ ihe ọnụ. Mmiri na al., 2000; Vd. Basso, Mara ma gughariaaphasia, 2009: 35)
Ntughari [usoro ọgwụgwọ]: Usoro nke mejupụtara na ikwugharị ihe onye na-ekwu okwu ka mepụtara, na-ahapụ ihe ọ pụtara na-agbanweghi agbanwe mana na-enye ihe atụ ziri ezi site na itinye okwu na-efu ma ọ bụ dochie okwu nwere nke ziri ezi ma ọ bụ karịa kwesịrị ekwesị (maka ozi ndị ọzọ lee "Usoro ndị dị na ntinye aka" na Okwu mmalite nke usoro ọgwụgwọ na oge uto, p. 235)
mkwado: [psychology, omume] ihe mkpali nke na-abawanye ma ọ bụ belata ihe puru iche nke ọdịdị omume ụfọdụ. Emezigharị ihe dị ụzọ anọ ụzọ atọ: isi, nke abụọ (ma ọ bụ ọnọdụ), nkwado dị mma na nke na-adịghị mma. Nkwalite mbụ bụ ndị metụtara lanarị (nri, ihe ọ drinksụ drinksụ, ehi ụra, mmekọahụ ...) ebe nkwalite nke abụọ bụ ndị na-anọpụ iche na-ebido na-enweta uru dị ka ha na-esonye na mkpali ndị ọzọ nwere ikike na-ewusi ike. Mgbakwunye dị mma na-abụkarị ihe a na-ahụ dị ka ihe na-atọ ụtọ ma na-eme ka ihe omume ụfọdụ ha na ha na-akpakọrịta belata na-adịghị mma na-eme ka akparamagwa na-adịghị mma dị ka nsonaazụ nke mmeju ya (lee lee. Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Isi nchedo: [neuropsychology, ịka nká] setịpụrụ usoro nke ọgụgụ isi, agbanwe site na onye ọzọ, emejuputara iche ma ọ bụ kwụọ usoro ọnya na-aga n'ihu. Ha dabere na njirimara nke mmadụ na netwọkụ akwara nke na-emetụta ahụmịhe nke ndụ dịka agụmakwụkwọ, ọrụ na ntụrụndụ (leekwa anya) Passafiume na Di Giacomo, Ọrịa Alzheimer, 2006).
Ahịrị nke ekwentị akpọrọ (SFI): [asụsụ] (ma ọ bụ syllabic ma ọ bụ protomorphic fillers) nwere a ofu ọnọdụ na okwu na ikekwe rụọ ọrụ nke "ọnọdụ nrịbama" nke ọtọ mmiri (Bottari et al., Nrụpụta ihe owuwu nke nnweta morphology n'efu Italiantali, 1993, ndị e zoro aka na: Ripamonti et al., Lepi: Asughari asusu di na nwata, 2017)
Nnyocha Mmekọ Semantic: [aphasia] na-egosi na iweghachite ihe omuma echiche na-eme site na ịnweta netwọkụ sistemụ dị ka nchepụta nke ebumnuche ọmụmụ asụsụ nke ebumnuche kwesịrị ime ka ebumnuche ahụ dị elu karịa ọkwa ya, na-eme ka mgbake nke okwu ahụ pụta, na-enwe mmetụta izugbe na ebumnuche ndị ọzọ na-ekere òkè n'otu agwa ahụ (lee Boscarato na Modena in Flosi, Charlemagne na Rossetto, Limezigharị onye ahụ aphasia, 2013: 44).
Nnyocha nke nnwale ahụ: [ọnụ ọgụgụ]: ​​ike nke ule iji chọpụta isiokwu ndị nwere njirimara ụfọdụ (ezigbo mma), dịka ọmụmaatụ ọnụnọ nke dyslexia. N'aka ozo, obu oke ndi mmadu, site na ule, di nma maka njirimara banyere nghota nke ndi nwere ya n'ezie; N'iburu ihe omuma nke dyslexia, uche bu ihe otutu ndi mmadu ndi na-adighi ike na ule, ma e jiri ha tụnyere onu ogugu ndi mmadu.
Ọ bụrụ na anyị na-akpọ S uche, Onu ogugu nke dyslexics gosiputara nke oma site na nnwale (ezigbo ihe) na B ọnụọgụ nke diski na-achọpụtaghị site na nnwale (echiche ụgha), mgbe ahụ enwere ike ịkọwapụta dị ka S = A / (A + B) .
Pingkpụzi:: [akparamaagwa, omume] Ntinye site na nnwale nke nzaghachi oru choro. Ọ mejuputara usoro omume nke isiokwu jiri nwayọ bịaruo nzaghachi a ga-enweta (dịka ọmụmaatụ, jiri nwayọ weta anụmanụ iji pịa onye na-agụ ọrụ) (leekwa anya Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Ntị ndọtị: [neuropsychology] Mwepụ nke nlebara anya site na otu ihe, ma ọ bụ ihe omume, gaa na nke ọzọ, ha abụọ dị na gburugburu gburugburu isiokwu ahụ (Marzocchi, Molin, Poli, Ntị na Metacognition, 2002: 12).
Cerebellar Cognitive-Affective Syndrome: [neuropsychology] kpakpando nke mmuta na mmetuta na-emetuta site na ncha nke cerebellum. Mmekọ ahụ nwere ike ịbụ ọtụtụ na-echekwa ọtụtụ ngalaba dị ka ebe nchekwa ọrụ, asụsụ, ọrụ ndị isi, mmụta zuru oke yana usoro mmụta, nhazi ọnọdụ-nhazi, nlekọta anya, mmetụta na ụkpụrụ omume (Schmahmann, Na cerebellum na cognition, 2018).
Ọrịa ọgbụgba: [neuropsychology] mgbanwe mgbanwe na-emetụta ọnya nke ngwugwu ọcha na-ejikọ ụbụrụ dị iche iche (leekwa Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001).
Balint Holmes ọrịa: [neuropsychology] syndrome neuropsychological mara simultanagnosia (nke pụtara na njirimara ihe onyonyo ụwa mgbe enwere ọtụtụ ihe), oculomotor apraxia (mpeche na ebughari ya na isi ihe) na optic ataxia (erughi na mmeghari nke ihe ịga nke ọma na ukwu aka). Ọrịa a na-enwekarị ọgbụgba na ọgbụgba Ladàvas na Berti, Akwụkwọ ntuziaka nke Neuropsychology, 2014).
Sistem Nlebara Anya: Norman na Willice ejirila sistemụ arụmọrụ mee nhazi. N’okwu mbụ ọ bụ usoro nchịkwa usoro a na-anọchi anya usoro omume mmụta dị iche iche a na-anọchi anya ya, nke ahọpụtara n’ime nzaghachi n ’ime gburugburu, dabere n’usoro ịgbalite akpaka; N'okwu nke abụọ, mgbe nhọrọ akpaghị aka ezughi iji rụọ ọrụ otu ọrụ ma ọ bụ ụdị mmado a abụghị arụmọrụ n'ọnọdụ akọwapụtara. Sistemụ Nlebara Anya nke na - egbochighachi ihe omume dị iche iche ịhọrọ nke kacha mma dabere n'ọnọdụ ndị ahụ (leekwa anya) Mazzucchi, Neuropsychological Rehabilitation, 2012).
Somatoagnosia: [neuropsychology] ịmara banyere ụdị ahụ mmadụ (hụkwa) Doron, Parot na Del Miglio, New Dictionary of Psychology, 2001)
Sound: [asụsụ] Usoro sistemu: iji ụda na-ekwu okwu dochie anya ụda ntị chiri. Ihe nlere: "bane" maka "achicha" (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology).
Mkpa ule ahụ [ọnụ ọgụgụ]: ​​ike nke ule iji chọpụta isiokwu ndị na-enweghị ụfọdụ njirimara (ezi ihe na-adịghị mma), dịka ọmụmaatụ enweghị nkwarụ. N'aka ozo, obu oke ndi mmadu, site na nnwale, weputa ihe ojoo nye akparamagwa ma atukwasi ya na nghota nke akwukwo ndi nwegh ya; N'iburu ihe atụ nke mgbaka, nkọwapụta bụ akụkụ nke isiokwu ndị nwere ahụike (na-enweghị mgbaka) n'otu ule, ma e jiri ya tụnyere ngụkọta nke ndị ahụ siri ike.
Ọ bụrụ na anyị kpọrọ S nkọwa, ọnụọgụ nke amamabaghị nke ọma site na nnwale (ezi echiche) na B ọnụọgụ nke ezigbo amataghị site na nnwale (nsonaazụ ụgha), mgbe ahụ enwere ike ịkọwapụta dị ka S = A / (A + B) .
stereo: [akparamaagwa] ugboro ugboro ugboro ugboro na otu ma ọ bụ karịa omume. Ha nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche: moto, na mkparịta ụka edere ma ọ bụ ekwuru, egwuregwu, ihe osise, wdg. (lee kwa - Galimberti, New Dictionary of Psychology, 2018).
Ịkwụsị: [asụsụ] dochie nke ekwentị na-aga n’ihu na nke na-anaghị aga n’ihu (ex: dal per giallo) (cf. isiokwu anyị na Phonetics na Phonology).
subitizing: ikike [neuropsychology] iji ọsọ mara ọfụma ịmata ọdịiche dị obere ihe (Kaufman et al., Discriminationkpa oke nke nọmba a na-ahụ anya, 1949).
Sulcus glottidis: ọnya [olu] kpatara site na invagiantion nke akpụkpọ anụ mucous nke ụda olu nke na-emepụta akpa nke na-abanye na ohere Reinke. Ekwenyere na ọ ga - esite na oghere onwe ya nke epidermoid cyst na afọ mbụ nke ndụ (cf. Albera na Rossi, Otolaryngology, 2018: 251).
Usoro echiche nke Multimedia Mmụta ma ọ bụ Cflix: [mmụta] tiori nke na-ahụ ịdị adị nke ọwa mmụta abụọ, otu ọhụụ na otu nyocha, nke ọ bụla nwere ikike nwere oke (ihe atọ ma ọ bụ anọ n'otu oge). Enwere ike ịhazi ozi dị iche iche, ya mere mụtara, ma ọ bụrụ na e kewara ya na ọwa abụọ (ọhụụ na nyocha) karịa otu ọwa (dịka ọmụmaatụ, ederede ederede na onyonyo); nke a ka a na-akpọ mmetụta mode.
Ọ bụrụ n’aka nke ọzọ, anyị na-ewepụta otu ozi ahụ n’otu ụzọ na ọtụtụ ọwa (visual na auditory) kama otu (dịka ọmụmaatụ, auditory), echiche a na-ebu amụma banyere nbibi nke arụmọrụ jikọtara ya na ibu ọrụ na ebe nchekwa; Nke a ka a na-akpọ nsụkọ ọrụ (leekwa ya anya) Mayer na Fiorella, cipleskpụrụ maka Mbelata Nhazi Nhazi na Mmụta Multimedia: Nnọkọ ọnụ, saịnye, ịkwụghachi ụgwọ, Spkpụrụ Ọnọdụ, na pokpụrụ Ọnọdụ Ọnọdụ, 2014)
Token Economy (Token Reinforcement Sistem): [akparamaagwa, akparamaagwa] akuko uche uche nke mejuputara “nkwekorita” n’etiti isiokwu na nne na nna ya ma obu onye nkuzi ya, site na ya bu iwu esite n’aka; ewee nye ihe atụ (ma ọ bụ akaebe) maka omume ọ bụla ziri ezi nke iwu ndị a chọrọ, ebe a ga-ewepụ ihe ngosi ọ bụla ma ọ bụ na agaghị enye ya n'ọnọdụ mmebi nke otu ahụ. Mgbe ha tozuru ọnụ ọgụgụ ihe akara aka tupu oge eruo, a ga-atụgharị ha na ego etinyere na mbụ (lee kwa Ime ihe ike na Spagnoletti, attmụaka na-eche nche na Hyperactive: Ọzụzụ nne na nna, 2013).
ndaba: [psychometry] ogo nke otu akụrụngwa (nnwale) na-egosipụta ngbanwe nke mmasị. Ọ bụ ihe mejupụtara ya bụ izizi ọdịnaya, ike ntozu na njikwa ike (hụ kwa) Statistics for Behavioral Sciences, Welkowitz, Cohen na Ewen, 2009).
Uru amụma amụma ya: [ihe onodu ogugu] nke puru ime ule iji tuta izuka nke ihe edeputara dika -abụghị inwe njirimara (ezi echiche) gbasara ngụkọta nke ndị na - emebi otu njirimara ahụ (ezigbo echiche + ezi echiche ụgha). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nọ n'ihu nnwale iji chọpụta isiokwu nke aphasic, uru amụma na-adịghị mma ga-abụ rashọn n’etiti isiokwu dị mma nke nnwale ahụ gosipụtara ma e jiri ya tụnyere ngụkọta nke ahụike gbakwunyere aphasics na-adịghị mma na nnwale ahụ (ezigbo ahụike + aphasic) adabaghị nke ọma.
Ọ bụrụ na anyị na-akpọ VPN ihe na-adịghị mma nke na-ebu amụma, ngụkọta nke isiokwu amamịghe mara nke ọma yana ngụkọta nke ihe ntụpọ na-ezighi ezi dị ka aphasic mgbe ahụ anyị nwere ike igosipụta uru amụma adịghị mma dị ka ndị a: VPN = A / (A + B).
Ezi uru amụma amụma: [onu ogugu enwere ugbua) ihe puru omume ule iji tuta izu nke isiokwu doro anya dika ndi nwere njiri mara (ezi ihe) na ngbako ndi ahu diri ezigbo agwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nọ n'ihu nnwale iji chọpụta isiokwu nke aphasic, uru dị mma ga-abụ uru dị n'etiti aphasics nke nnwale ahụ gosipụtara ma e jiri ya tụnyere ngụkọta nke aphasics na ndị na-abụghị aphasics nke dị mma maka nnwale ahụ (ezigbo aphasics na ahụike ahụike chọpụtara emehie dị ka aphasic).
Ọ bụrụ na anyị na-akpọ VPP ihe dị mma nke na-ebu amụma, ngụkọta nke ntụpọ nke aphasic n'ụzọ ziri ezi yana ngụkọta nke ihe ọmụmụ ahụike na-achọpụta n'ụzọ na-ezighi ezi dị ka aphasic mgbe ahụ anyị nwere ike igosipụta uru amụma dị mma dị ka ndị a: VPP = A / (A + B).
Etu ahia efu (usoro iji atụlata mbelata): Usoro ncheta [neuropsychology] lekwasịrị anya na mbelata nke usoro ndị mmadụ banyere ozi a ga-echeta, mgbe usoro mmụta nke otu (leekwa ya anya. Glisky, Schacter na Tulving, Mmụta na njigide okwu okwu metụtara kọmputa na ndị ọrịa nwere oke ncheta: Metzọ nke mpịachi efu, 1986).
ndịiche: [ọnụ ọgụgụ] nke mgbanwe nke parameter nke ihe ha na-ekwu; na -ele ole uru ụkpụrụ ndị a na-agbaghari n'ụzọ ọsọ ọsọ site na usoro ọmụmụ (lee kwa Ime ihe ike na Spagnoletti, attmụaka na-eche nche na Hyperactive: Ọzụzụ nne na nna, 2013).
vergeture: olu nke olu n’adighi eriri nke eriri olu na nnabata mucosa na akuko olu (cf. Albera na Rossi, Otolaryngology, 2018: 251)